Xijaar iyo Madeira ma sii shaqeyn doonaan? | KEYDMEDIA ENGLISH
Xijaar iyo Madeira ma sii shaqeyn doonaan?
Tan iyo markii uu Ra’iisul Wasaarhu dalka ka raacdeeyay Madeira, cagaha sooma dhigin dalka, waxaana la filayaa in Howlgalka Midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya [ATMIS], uu yeesho hoggaamiye cusub maalmaha soo socda.
MUQDISHO, Soomaaliya – Karka siyaasadeed ee kala aragti duwanaantu sababtay xilligii uu billwday firaaqa hay’adaha Dastuuriga ah, kala aamin baxa iyo kooxeysiga, ayaa keenay isku-dhex-yaax iyo kala amar qaadasho la’anta masuuliyiinta ugu sarreysa dalka, gaar ahaan Laanta Fulinta iyo hoggaanka hay’adaha Amniga Dowladda Federaalka.
Dadka Soomaaliyeed ayaa si weyn isku weydiinaya labo arrimood, oo waaweyn, kuwaas oo sidoo loo qorsheeyay aan u hirgalin, waana raacdeytii Danjire Francisco Madeira iyo shaqo ka joojintii Taliyaha Ciidanka Booliska Cabdi Xasan Xijaar, kuwaas oo Xukuumaddu ku eedeysay in ay ku milmeen siyaasadda, kama tallaabeen dhexdhexaadnimadii.
Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Danjire Francisco Madeira, ka raacdeeyay dalka, 7 April 2022, kadib markii uu ku kacay arrimo ka baxsan shaqadiisa, waxaana loo qoray [Persona non grata], taasoo ka dhigan inuu yahay shaqsi aan waddanka looga baahneyn.
Farmaajo, oo aan heysan wax sharciyad ah, tan iyo 8 February 2021, horena ay u dhaqan gali waayeen wareegtooyin uu soo saaray, ayaa ka hor yimid go’aanka uu RW Rooble dalka uga saaray Francisco Madeira, oo isaga ku daabnaa, waxaana go’aankaas mid la ceyn ah qaatay Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika, Moussa Faki Mahamat.
Diidmada Midowga Afrika ee go’aanka Ra’iisul Wasaaraha, ayay diblimaasiyiintu, ku macneeyeen, in u-jeedadeedu tahay, in la dhowro sumcadda danjire-nimo ee Francisco Madeira, kaliyana la muujinayo in uusan ku bixin Persona non grata, hayeeshee, sida la rumeysan yahay Danjire Francisco, kama sii shaqeyn karo Soomaaliya.
Tan iyo markii uu Ra’iisul Wasaarhu dalka ka raacdeeyay Madeira cagaha sooma dhigin dalka, waxaana la filayaa in Howlgalka Midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya [ATMIS], uu yeesho hoggaamiye cusub maalmaha soo socda, sida Ilo Diplomaasiyadeed u sheegeen Wargeyska The EastAfrican, oo arrimaha Afrika aad uga faallooda.
Sidoo kale, Ra’iisul Wasaaraha, ayaa dhankiisa la sheegay in uusan awood u lahayn inuu qoro Persona non grata, taasoo u furan kaliya Madaxeeyne sharci ah, oo muddo xileed rasmi ah heysta, waxayna qubaradu ku doodeen maadaama Rooble, masuul ka yahay amniga iyo doorashooyinka, ay ahayd inuu hadalkiisa u dhigo in uusan la shaqyn karin Madeira.
Dhanka kale, Wasiirka Amniga Gudaha, Cabdullaahi Maxamed Nuur, ayaa shaqo joojin ku sameeyay Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed [Xijaar], 27 April 2022, hayeeshee, Xijaar, ayaa wali sii wata shaqadiisii, waxaana la is weydiinayaa sababta ay taasi ku dhacday?
Xijaar, wuxuu is hor istaag bareer ah ku sameeyay dhaarinta Xildhibaannada Golaha Shacbka ee laga soo doortay Ceel-waaq, halka uu jid-gooyo u dhigtay Xildhibaannada Aqalka hoose oo dhan, si aan loo dooran Guddoonka Golaha shacabka, isagoo u adeegaya Farmaajo, oo caqabad ku ah dhameystirka doorashooyinka dalka.
Sida ay KON ogaatay, kulan 27 April 2022, ka dhacay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, oo ay ka qeyb galeen, RW Rooble, Midowga Musharixiinta, iyo qaar ka mid ah Madaxweynayaasha maamullada, ayaa lagu go’aamiyay in Xijaar sii wato shaqadiisa, si looga fogaado in ay baaqato doorashada Guddoonka Golaha oo xilligaas loo ballansanaa.
Sida ku cad dastuurka dalka u yaalla, marka uu dhamaado muddo xileedka Madaxweynaha, waxaa howl-maalmeedka sii wadaya Xukuumadda, mana jiro qodob dastuuri ah oo sheegaya in Wasiir xilka ka raacdeyn karo taliye ciidan, xilliga xil-gaarsiinta, maadaama ha’adda fulinta waqtigeedii dhamaaday oo kaliya ay shaqo garsiin tahay.
Sida muuqata Xijaar, wuuxuu noqon doonaa shaqsiga ugu horreeya ee xilkiisa waaya, wixii ka danbeeya bishaan May, marka waddanku yeesho, hoggaan rasmi ah, maadaama uu ku sifoobay dhex-dhexaadnimo la’aan iyo nin jecelsi gaar ah, itii uu joogay xaafiiska ugu sarreya taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.